यो हो सेनाको जोल्ट
सुशासन, पारदर्शिता, सम्पत्ति सार्वजनिक, अनियमित र अमर्र्यािदत परम्पराको अन्त्य सुरु भयो भन्ने सन्देश दिएका छन् प्रधान सेनापतिले ।
कसकसले पाप गरे होलान्, मबाट त्यस्तो हुन्न भन्ने जुन निर्मलीकरणको सुरुआत गरेका छन्, अव नेपाली सेनाभित्र दोषी काम गर्ने र दोष देख्नेहरु सफा हुनेछन् ।
प्रधानसेनापतिको सबल प्रतिवद्धता भनेको सेनालाई थप व्यवसायिक र जवाफदेही बनाउन आवश्यक परे अझ कठोर कदम चाल्छु भन्ने नै हो । वर्षदिनको कार्यकालको आत्मसमीक्षा गर्दै प्रधानसेनापतिले भनेका छन्– ‘आवश्यक परे घाउको शल्यक्रिया गरी फ्याँक्ने उपचारका लागि आगामी वर्ष म केही कठोर हुनसक्ने सम्भावनाबारे तपाईंहरुलाई सजग गराउन चाहन्छु । मसँग धेरै सहज बाटाहरु पनि थिए र, अझै पनि छन् । तर मैले
कठिन भएपनि सही तरिकाले पदीय दायित्व निभाउने अठोट गरेको छु । बाधा व्यवधानहरु पन्छाएर, गलत पद्धती विकास हुन नसक्ने गरी सम्भावित उत्तराधिकारीलाई पद हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु । ‘शल्यक्रिया गर्न‘पर्ने घाउलाई हृयाण्डिप्लास्ट वा टालोले छोप्न खोज्नु समयको बर्बादी मात्र हो । त्यसैले ओखती मात्र होइन, शल्यक्रिया आजबाट सुरु गरौं । अरुले गरेको गल्ती, कमजोरी वा अनैतिक लाभको पापको भारी मैले किन बोक्ने ? एकाध व्यक्तिले गरेको अपराधका कारण सेनाको प्रतिष्ठामा आँच आउन किन दिने ? एकाध व्यक्तिका कारण संगठन किन बद्नाम हुने ? संगठनको समस्याका रुपमा भर्ना प्रक्रियामा भनसुन, घरकाज, अपारदर्शी खर्च, कमसल भौतिक संरचनाका साथै सेनाको चरित्रहरण गर्ने विषयहरु छन् । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ औषधि सर्जरी गर्दैनौं भने निको कसरी हुन्छ ? केही समस्या नियमित अभ्यासले संस्थागत भएको होला । र, यो समाधान गर्न केही समय पनि लाग्न सक्छ ।
प्रधानसेनापतिले प्रष्टै भनेका छन्– संगठनको वातावरण सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यो वातावरण निर्माण गर्ने हामीले हो । हामी सही भयौं भने विश्वास बढ्छ, विश्वासले वातावरण सिर्जना गर्छ । यो विभिन्न तहका कमाण्डरहरुले आ–आफ्नो तहमा निर्माण गर्ने हो, सकलदर्जाले यसमा आफ्नो क्षमता र दक्षताले योगदान गर्ने हो भनेर मातहतका सबैलाई आह्वान पनि गरेका छन् । संगठनका लागि आवश्यक त्यो आँट र हिम्मत नेपाली सेनाका सकलदर्जाले मलाई प्रदान गरेका छन् । कसैलाई उचाल्ने र पछार्ने साङ्गठनिक राजनीति बन्द नभई क्षमतावान र कर्मयोगीले अवसर पाउँदैनन्, संगठनमा सकारात्मक वातावरण सिर्जना हुन सक्दैन । नेपाली सेनाजस्तो संगठनमा यो प्रवृत्ति हावी हुनुहुँदैन ।
सेनालाई हेर्ने र सेनाभित्र रहेका सडेगलेका मानसिकतालाई खुर्कने र राष्ट्र सेवामा नमकको सोझो गर्ने यस्तो प्रतिवद्धताले नेपाली सेना अझ सशक्त हुने विश्वास बढेको अनुभूति सर्वत्र फैलिन पुगेको छ ।